Tim Cook sy Eddy Cue miaraka amin'ny Sun Valley Conference | Avy amin'ny mac aho
Miaraka amin'izany dia efa misy dimy taona izay ny mpitantana ambony an'i Apple dia nilatsaka tamin'ny Sun Valley Conference, fihaonambe tena manan-danja izay fihaonan'izy ireo olona manana fahefana be eo amin'ny sehatry ny haitao ary koa olona manana fahefana sy mpanao politika.
Tamin'ity taona ity dia azo atao ny mahita ny CEO an'ny Apple ankehitriny, Tim Cook, miaraka amina mpanatanteraka Apple iray hafa, Eddy Cue malalantsika. Tsy nisy navoaka ny vaovao momba ny fivoriana azon'izy ireo nanatrehana na ny olona izay niarahan'izy ireo niombom-pihetseham-po, saingy mazava fa "manapaka trondro betsaka" ity fihaonambe ity.
Nandritra ny taona maro dia hitantsika ny fampihenan'ny Apple ny fandraisany anjara amin'ny hetsika maro. Ny iray amin'izy ireo dia ilay Macworld angano, manan-danja tokoa amin'ny maro ary hadinon'i Apple ary koa lany tamingana. Ireo avy any Cupertino dia mandeha irery ary efa nisafidy ny hanangana ny kaonferansa ho azy ireo, WWDC ary mihaona mizaka tena amin'ny manampahefana maro araka izay heverin'izy ireo fa mety.
Tsy nitsahatra ny nandehandeha tany India sy Sina i Tim Cook mba hifanarahana amin'ny fifanarahana akaiky, izay efa notononinay anarana efa amam-bolana maro izao, miaraka amin'i Eddy Cue, nanatrika ny Sun Valley Conference. Amin'ity fihaonambe ity, araka ny nantenainay, dia nahita toerana ambony izy ireo toa ny CEO an'ny CBS Les Moonves, Ben Sherwood avy amin'ny ABC na ny CEO an'ny Sony Kazuo Hari, ankoatry ny hafa.
Na izany aza, ny hany nahatratrarana an'i Tim Cook dia miaraka amin'ny CEO an'ny The Walt Disney Company ny tenany. Miverina indray izahay fa ny orinasa manana paoma manaikitra dia manohy mitady mpiara-miasa ary amin'ity tranga ity dia misy ifandraisany amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra sy mahery.
Ho hitantsika raha amin'ny sisa amin'ny taona dia apetrak'i Apple eo ambony latabatra ireo vokatra hanamora ny fiainantsika. Raha manao famerenana ny zavatra apetrak'i Apple amin'izao fotoana izao ianao dia ho tsapanao fa mametraka ny mpampiasa farany ho zava-dehibe indrindra amin'ny rojo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tim Cook sy Eddy Cue miaraka amin'ny Sun Valley Conference